भसुलाले हालै १३ मार्च २०२० मा प्राप्त गर्नु भएको सन्देश पठाउनु भएको छ ! | True Life in God Radio | Vassula | Official Website
“मानिसहरुलाई बोलाऊ र ’emलाई भन : साँचो पश्चाताप र प्रार्थना बिना यो दुष्ट तिमीहरुले सोचेको भन्दा लामो समय सम्म रहनेछ । म तिम्रो प्रभु तिर फर्क र पश्चाताप गर । एक निश्कपत र विश्वब्यापी प्रार्थना म कहाँ पुग्न सक्नेछ । उपवास ले प्रेतहरुलाई धपाउने छ । तिमीहरको त्यागलाई म स्वीकार्ने छु । तिमहिरुको सुस्त भावना र कुकर्मलाई त्याग र म तिम्रो परमेश्वरसंग मिलाप गर । प्रभु हामी पापीहरु माथि कृपा गर्नुहोस् भनी मलाई सुन्न देऊ ! र म आफ्नो अनुकम्पा तिमीहरु माथि देखाउने छु । म तिमीहरु सबैमा आशिष बर्षाउने छु । नडराउ, म सुनीरहेको छु , आऊ …”
परमेश्वरले हामीलाई सुन्नुहुनेछ यदी हामीले पश्चाताप गर्दै परमेश्रमा अघि बढ्यौ भने, उहाँले हामी माथि अनुग्रह गरि शान्ति प्रदान गर्नुहुनेछ । हामी संसारको लागी प्रार्थना गरिरहेका छौ । उहाँको अनुहार हामी माथि चम्काउन को निम्ति प्रार्थना गरौ । हामी बिन्ति गरौ ताकी उहाँ हामी प्रती कृपालु हुनुहुनेछ …। हामीले TLIG परमेश्वरले हामीलाई सुन्नुहुनेछ यदी हामीले पश्चाताप गर्दै परमेश्रमा अघि बढ्यौ भने, उहाँले हामी माथि अनुग्रह गरि शान्ति प्रदान गर्नुहुनेछ । हामी संसारको लागी प्रार्थना गरिरहेका छौ । उहाँको अनुहार हामी माथि चम्काउन को निम्ति प्रार्थना गरौ । हामी बिन्ति गरौ ताकी उहाँ हामी प्रती कृपालु हुनुहुनेछ …। हामीले TLIG का सन्देशहरुमा थियो , पुर्ण रुपमा बहिरा कानहरुमा पर्ने गरी सन्देशहरु पुर्याऊ .